Safidio izao - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > 2016-03 mpandimby ny Magazine > Manapaha hevitra amin'izao fotoana izao
Betsaka ny olona miaina taloha ary tsy mieritreritra ny amin'izay mety ho. Nandany ny fotoanany rehetra izy ireo handrosoana amin'ny zavatra tsy azon'izy ireo atao intsony.
Izy ireo dia miatrika zavatra toy ny:
"Raha mba nanambady ilay freak aho dia noheveriko tany amin'ny oniversite fa resy izy ary olo-tapitrisany ankehitriny." "Raha mba nanaiky ilay asa tao amin'ny orinasa aho, dia noheveriko fa izy tsy nisy ela. Fa izao izy dia manana ny ampahany betsaka amin'ny tsena. "" Raha tsy mbola bevohoka aho tamin'ny 16 taona. "" Raha mba nahavita ny fianarako teny amin'ny anjerimanontolo fotsiny aho fa tsy nandatsaka ny zava-drehetra. "" Raha mba tsy nahavita mamo be loatra aho ary tsy hamela ahy haka ny tatoazy izy ireo. "" Raha tsy ...
Ny fiainan'ny tsirairay dia feno tombontsoa, ​​fanapahan-kevitra hendry ary manenina. Saingy tsy azo ovaina intsony ireo zavatra ireo. Tsara kokoa ny manaiky azy ireo, mianara avy aminy ary mandehana. Na izany aza, toa ny olona maro no toa babo amin'ny zavatra tsy mety ovaina.
Ny hafa kosa miandry ny fiainany amin’ny fotoana tsy voafetra amin’ny hoavy. Eny, miandrandra ny hoavy isika, nefa miaina ankehitriny. Velona amin’izao fotoana izao Andriamanitra. “Izaho” no anarany fa tsy hoe “Izaho” na “Izaho ho” na “Raha mba nisy aho”. Ny lalana iarahana amin’Andriamanitra dia dia andavan’andro ary maro ny zavatra tsy ho vitantsika raha tsy mifantoka amin’ny zavatra nomanin’Andriamanitra ho antsika anio isika. Fanamarihana: Tsy omen’Andriamanitra antsika anio izay ilaintsika ho ampitso. Hitan’ny Israelita izany rehefa nanandrana nanangona mana ho an’ny ampitso (2. Mosesy 16). Tsy misy maharatsy ny manomana ny ho avy, fa Andriamanitra no manome izay ilaintsika isan’andro. Mivavaka izahay hoe: “Omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay”. Matthew 6,30-34 dia milaza amintsika mba tsy hanahy ny amin'ny ampitso. Miahy antsika Andriamanitra. Aza mitomany ny lasa sy manahy ny amin’ny ampitso, hoy i Matio 6,33 Ny tokony hifantohantsika amin’izany dia ny hoe : “Katsaho aloha ny fanjakan’Andriamanitra...” Anjarantsika ny mitady an’Andriamanitra, manana fifandraisana aminy ary mahatsapa ny fanatrehany ary miray feo aminy isan’andro. Tokony hojerentsika izay ataon’Andriamanitra ho antsika ankehitriny. Laharam-pahamehana izany ary tsy ho vitantsika izany raha miaina amin’ny lasa hatrany
na miandry ny ho avy.
Soso-kevitra amin'ny fampiharana
Mamakia andinin-teny vitsivitsy ao isan'andro, ary mieritrereta ny fomba mety hampiasana azy ireo amin'ny fiainanao.
Mangataha amin'Andriamanitra mba haneho aminao ny sitrapony sy ny faniriany ho tonga fanirianao.
Jereo ny famoronana manodidina anao - ny fiposahan'ny masoandro, ny filentehan'ny masoandro, ny voninkazo, ny vorona, ny hazo, ny tendrombohitra, ny renirano, ny lolo, ny fihomehezana ny ankizy - na inona na inona hitanao, henonao, fofona, tsiro , mahatsiaro - manondro ny Mpamorona anao.
Mivavaha imbetsaka isan'andro (1. Tes 5,16-18). Manaova vavaka lava kokoa sy fohy feno fisaorana sy fiderana, fitalahoana ary fifonana mba hifantoka sy hitoetra amin'i Jesosy2,2).
Amin’ny alalan’ny fisaintsainana tsy tapaka ny Tenin’Andriamanitra, ny fotopoto-pitsipika ara-baiboly, ary ny fomba hitondran’i Kristy ny toe-javatra sasany ho ahy, dia tariho ny eritreritrao mandritra ny andro (Salamo 1,2; Joshua [space]]1,8).